Gobolka Astrakhan - majaladda "Nidaamka Baradhada"
Bogga guriga Calaamadda Gobolka Astrakhan
Calaamadda: Gobolka Astrakhan
90% miraha baradhada ee Astrakhan waxay ka yimaadaan Ruushka
Qaybta ugu weyn ee alaabta abuurka baradhada, kaas oo ka baxa gobolka Astrakhan, waxaa bixiya shirkadaha abuurka Ruushka. Sidaa waxa ku dhawaaqay Wasiir ku xigeenka Wasaaradda Beeraha...
600 oo tan oo baradho hore ah oo ka yimid Iran ayaa yimid Astrakhan
Iran waxay sii wadaa inay siiso wax soo saarka beeraha Astrakhan. Maalin ka hor, tareen kale ayaa yimid saldhigga Kutum, kaasoo keenay 600 oo tan oo baradho hore ah oo loogu talagalay ...
Beeraha casriga ahi maaha oo kaliya majarafad iyo daloolo, laakiin sidoo kale qalab cusub oo u baahan aqoon iyo xirfado gaar ah. ...
Gobolka Astrakhan wuxuu kordhin doonaa wax soo saarka baradhada ee chips iyo shiilan
Sannadkii afraad ee degmada Enotaevsky ee gobolka Astrakhan, baradhada ayaa la koray si loogu diyaariyo jajabyo iyo shiilan. Shirkadda "MAPS" ayaa arrintan ku hawlan. ...
Gobolka Astrakhan ayaa qorsheynaya inuu kordhiyo dhulka lagu beero 5%
Beeralayda Astrakhan waxay si buuxda ugu diyaar garoobeen shaqada guga, Ruslan Pashayev, Wasiirka Beeraha iyo Kalluumeysiga ee gobolka, ayaa sheegay in rasmi ah ...
Natiijooyinka la socodka aboor baradhada ee gobolka Astrakhan
Khabiiro ku takhasusay karantiilka dhirta iyo abuurka abuurka ee laanta Astrakhan ee Xarunta Tixraaca Rostov ee Rosselkhoznadzor, oo ay weheliyaan kormeerayaasha Agaasinka Rosselkhoznadzor ee Rostov, ...
Astrakhan ayaa saadaalisay kororka qiimaha baradhada
Soo -saarayaasha khudaarta ayaa kula taliya dadka deggan gobolka in ay kaydiyaan baradhada halka qiimuhu uu yahay mid la awoodi karo. Sida ay qortay bogga wararka ee Astrakhan Fm, ...
27 nooc oo basasha ah oo ay tijaabiyeen kuwa ka soo jeeda gobolka Astrakhan
Dhamaadkii Sebtembar, cilmi-baaris iyo cilmi-baaris ku saabsan basasha ayaa lagu qabtay gobolka Kharabalinsky. Ka qaybgalayaashu waxay qiimeyn karaan 27 nooc oo rajo leh oo laga beeray ...
Bishii Luulyo 9-keedii, gobolka Astrakhan, oo ah goob ay ku taallo shirkad weyn oo baradho-koraysa LLC MAPS, ayaa Maalinta Hal-abuurka “Teknolojiyada Baradho” ka dhacday. Munaasabadan ayaa waxaa soo qaban qaabiyay ...
Noocyo iyo teknoolojiyad baradho koraya oo loogu talagalay Koonfurta Ruushka
Bishii Juun 24, dhacdo cusub oo muhiim u ah beeraleyda baradhada ayaa ka dhacday gobolka Astrakhan - tuulada Kilinchi, degmada Privolzhsky, ee dhulka ...